Vote For Best Banner Of 2008 | My Burmese Blog
Vote For Best Banner Of 2008	On January 8, 2009	by Htoo Tay Zar	With	10 Comments	- Blogging, Creation, Design	မင်္ဂလာပါ.. အချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်း ကုန်လာခဲ့တာ အခုဆိုရင် တနှစ်ဆိုတာလဲ ကုန်သွား ပြန်ပြီ.. ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်က ၂၀၀၈ အတွင်းမှာ သုံးခဲ့တဲ့ banner တွေကို ပြန်စုပြီး မဲပေးလို့ ရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ လှတယ် ထင်တဲ့ banner ကို အောက်ဆုံးက poll မှာ vote လုပ်ပေးကြပါဦး ခင်ဗျ။ Multiple Vote ရပါတယ်။
ဒီ Banner တွေ အားလုံးကို ကျွန်တော် Photoshop အဓိက သုံးပြီး ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ Banner တွေကို သူ့ ရာသီ၊ ပွဲတော်၊ အထိမ်းအမှတ်နေ့ တွေ အလိုက် သုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အချို့ လိုဂိုတွေက သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ logo တွေ သုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု နှစ်မှာလဲ အမြဲပြောင်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၇ တုန်းကတော့ တနှစ်လုံးမှာမှ ဘန်နာ ၅ ခုသာ လဲနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မှာတော့ စုစုပေါင်း ၁၇ ခု ရှိပါတယ်။ အောက်က ပုံတွေကို အကြီး ကြည့်ချင်ရင် ကလစ်လုပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ။
1. Happy New Year 2009
2. Blog Action Day 2008
3. Blog Day 2008
5. 3D Blog Banner
7. Go Pink
8. Guitar Hero Banner
9. Aqua Blue Reaper Banner
10. Guitar, Amp & FX Banner
11. Myanmar Happy New Year Thin Gyan Banner
12. Need For Speed Pro Street Style Banner
13. Pimp My Ride Style Banner
14. Happy New Day Banner
15. Happy Valentines Day Banner
16. Urban Style Banner
17. Tribute to Randy Rhoads Banner
The Best Banner Of 2008 ( polls)
Blogging	10 Comments	သဉ္ဖာ
vote သွားတယ်။ banner အိုင်ဒီယာလေးတွေ ကောင်းတယ်။ အစ်မလည်း photoshop တော့ သုံးတတ်ပေမယ့် ဘန်နာဆွဲဖို့ထိုင်လိုက်ရင် ဘာအိုင်ဒီယာမှ ထွက်မလားဘူး။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဘန်နာကို မဆွဲဖြစ်သေးဘူး။ သူများဘန်နာတွေဘဲလိုက်ပြီး သွားရေကျနေတယ် …
Like or Dislike:00	Myo Kyaw Htun
I like #14 and #16 voted!
Like or Dislike:00	mtj
ဗုဒ် လုပ်သွားတယ် ညီရေ.. အခုတလော တရပ်စပ်ကို ဗုဒ် ချင်နေတာ Like or Dislike:00	KhineKhine
အကုန်လှလို့ ဘယ်ဟာကို vote လုပ်ရမှန်းတောင် မသိဘူး ၈ ခု vote လုပ်ခဲ့တယ်.
10 ကို vote လုပ်သွားပါတယ်….
အားလုံး လန်းတယ်. အကြိုက်ဆုံး ၁၀ နှင့် ၁၁ ကို မဲပေးခဲ့တယ်ညီ. Like or Dislike:00	ဆူးလင်းသစ်
8 နဲ့ 14 ကို သဘောကျမိတယ်ဟ
အမ သဉ္ဖာ, Bro Myo Kyaw Htun, Bro mtj, Sis KhineKhine, exiter, MhawSayar, ဆူးလင်းသစ် နှင့် အားလုံး vote လုပ်ပေးကြတာ ကျေးဇူးပါ ရှဲရှဲ
Like or Dislike:00	Pascal
ကြိုက်တယ်ကွာ ၁၂ အမိုက်ဆုံးပဲ
Like or Dislike:00	Vote for Blog Banners 2009 | My Burmese Blog
[...] Vote For Best Banner Of 2008 Vote For Best Banner Of 2007 Related PostsBlog Action Day 2009 ~ Climate ChangeBlog Day 2009Blogger Supports Twitter, Recent Posts, Comments WidgetsBlog Analytics 2009 WordPress 2.9 Screenshot Leak!!Vote For Best Banner Of 2008WordPress Vs Blogger [...]